Naya Drishti | कुन राशिका व्यक्तिले कुन राशिको जिवनसाथी बिबाह गर्नु उत्तम हुन्छ ? - Naya Drishti कुन राशिका व्यक्तिले कुन राशिको जिवनसाथी बिबाह गर्नु उत्तम हुन्छ ? - Naya Drishti
मंसिर ०६, सल्यान । मंसिर महिना सुरुभए देखि बिबाह गर्ने, गराउनेहरू देखि लिएर सबै तिर बिबाहकै चर्चा हुन्छ । मंसिरमा बिबाहका धेरै लगनहरू हुने भएकाले पनि यस्तो चर्चा भएको हुन सक्छ ।
तर पछिल्लो समय बिबाहका यस्ता सनातन र पुराना परम्परा बिस्तारै लोप हुन थालेका छन । आधुनिकताको नाममा उपयुक्त लगन र मुहर्त ननिकालेरै बिबाह गर्ने चलन बढेको छ ।
धर्म, संस्कृति र शास्त्रहरूमा रहेको ज्ञान् र बिज्ञानलाई बोध गर्नु भन्दा पनि सतही र लहलहैपनाले नयाँ पुस्ता लाई गाँजेको छ । स्वतन्त्रताको नाममा हतार हतार बिहे गर्ने र हतार हतार संबन्धबिच्छेद गर्ने संकृती दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
मान्छेको जिवनमा उ जन्मिएको समय र त्यस समयमा ब्राह्मणमा रहेका ग्रह, नक्षेत्रको अवस्था ( राशी) ले पनि उस्को जिवनमा प्रभाव पार्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले भन्ने गरेको छ । ज्योतिष शास्त्र कुनै कर्मकाण्ड वा रुढीबाद होइन, गणित र बिज्ञान हो ।
ज्योतिष डा. सुनिल सिटौला भन्नुहुन्छ – “विज्ञान भनेको प्रविधि मात्र होइन, दर्शन पनि हो । हामीले विज्ञान भन्नेबित्तिकै प्रविधिमा मात्र जोड दियौं, प्रविधि विज्ञानलाई प्रस्तुत गर्ने यन्त्र हो ।
यन्त्र मात्र विज्ञान होइन, मुख्य कुरा त दर्शन हो । हामी दर्शनबाट अभिप्रेरित हुनुपर्‍यो । ज्योतिष विज्ञान दर्शन पनि हो, विज्ञान पनि हो । अहिले मानिसको भाग्य र भविष्य बताउने कुनै विज्ञान छ भने त्यो ज्योतिष विज्ञान मात्र हो ।”
“ज्योतिष विज्ञानलाई संस्कृतमा सूर्यलगायतका ग्रहहरूको जानकारी राख्ने शास्त्र भनिएको छ । अमेरिका, युरोप तथा रूसका आ–आफ्नै अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् ।
त्यसभन्दा धेरै वर्षअघि भारत वर्षमा ज्योतिषीहरूले ग्रहको गणित गर्थे, ग्रहणको गणित गर्थे । यसको पहिलो नियम भनेको सूर्यलगायतका ग्रहहरूको अध्ययन गर्नु हो । ग्रहहरूका बारेमा व्याख्या गर्ने ज्योतिषलाई हामी फलित ज्योतिष भन्छौं ।”
“फलादेशहरू यही फलित ज्योतिषका आधारमा गरिन्छ । कुनै मानिसको जन्मपछि उसको विवाह कस्तो हुन्छ, उसको सन्तान कस्तो हुन्छ, विद्या कस्तो हुन्छ, मातापितासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ यावत् कुरा ज्योतिष विज्ञानमार्फत विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
त्यसमा एउटा विवाहको कुरा हो, विवाह शुभ हुन्छ कि हुँदैन वा एकभन्दा बढी विवाह हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो जन्मको साइतबाटै थाहा हुन्छ ।”
ज्योतिष डा. सुनिल सिटौलाका अनुसार ज्योषितशास्त्र अनुसार यो समयमा जन्मिएको व्यक्तिको विवाह यो दिशातिर यस्तो राशि यस्तो रूप, रंग, स्वभाव भएकोसँग विवाह हुन सक्छ भन्न सकिन्छ ।
सिटौलाका अनुसार सामान्य रूपमा आफ्नो राशिबाट गन्दै जाँदा ६, ८ र १२ को राशि पर्‍यो भने विवाह टिक्दैन ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “जस्तो— मेषबाट गन्दै जाँदा कन्या ६, वृश्चिक ८ र मीन १२ हुन्छ । यसमा एउटा अर्को नियम पनि छ, केटीको राशि अगाडि आयो र केटाको पछि आयो भने विध्वंस हुन्छ, केटाको राशि अगाडि आएर केटीको पछि आयो भने अलिअलि मिल्छ ।
अर्को नियम राशि परस्पर फरक ६, ८ पर्‍यो तर राशिको स्वामी मित्र भयो भने मिल्छ । देवगण, मनुष्य तथा राक्षस गणको पनि नियम छ, जुन जन्मको नक्षत्रबाट निर्धारित हुन्छ । एउटै गणमा प्रीति हुन्छ ।
नाडी भन्ने अर्को हुन्छ एउटै नाडीमा विवाह भयो भने सन्तानमा बाधा हुन्छ भनिन्छ । धर्मशास्त्रमा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन, सन्तानमा वंशाणुगत खराबी देखिन्छ भनिन्छ, नाडीको नियम ठ्याक्कै त्यही हो ।”
कतिपय लभ म्यारिज बढी टिक्दैनन् किन ?
सिटौला भन्नुहुन्छ – “ज्योतिषशास्त्रले पुरुष र स्त्रीलाई परस्पर फरक–फरक दिशाबाट जोड्छ । उनीहरूलाई एकआपसमा बाँध्ने काम यौनले मात्र गर्छ । ज्योतिषशास्त्रमा उदय लग्न आफ्नो हुन्छ भने अस्त लग्न विपरीत हुन्छ ।
यौनले मात्र स्त्री–पुरुषलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भएकाले ज्योतिषशास्त्रमा यौन जीवनका लागि योनि भन्ने छ । पुरुषको योनि के हो, स्त्रीको योनि के हो त्यसबाट थाहा हुन्छ । त्यो योनि परस्पर शत्रु राशिमा पर्‍यो भने उनीहरूको सम्बन्ध चाँडै टुट्न सक्छ ।
ज्योतिषशास्त्रमा हामी मुहूर्त मिलाउँछौं तर लभ म्यारिज गर्नेहरू भावनाबाट प्रेरित हुन्छन् । ज्योतिषशास्त्रले मिलाउने भनेको उनीहरूको आत्मीक एवं दैविक डिभाइन हो ।”
#बिबाह #मंसिर #लगन